Yimiphi imigomo yokuhamba oyidingayo ngaphambi kokuya phesheya kwezilwandle - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Ukuphila Kahle Izidakamizwa Vs. Umngani Ukuphuma Umphakathi Umphakathi, Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izindaba Cindezela Izindaba Inkampani, The Checkout Inkampani, Imfundo Yezempilo
Main >> Imfundo Yezempilo >> Imiphi imigomo oyidingayo ngaphambi kokuya phesheya kwezilwandle
Iphasiphothi yakho isilungile, futhi izikhwama zakho zigcwele amaholide akho aphesheya kwezilwandle. Kodwa kunento eyodwa okungenzeka ukuthi ungayinaki: imigomo yokuvakasha.
Ukuhambela phesheya kungaba yinto ejabulisayo, kodwa futhi kungakuchaya ezifweni obungeke uhlangane nazo ngokujwayelekile ekhaya. Lokho kusho ukuthi ngaphandle kokubeka isidambisi eholidini lakho, ungahlangabezana nenkinga enkulu yezempilo. Ukuthola ukugoma ngaphambi kokuhamba kwehlisa ubungozi bezifo ezithathelwanayo futhi kukuvumela ukuthi ugxile ezintweni ezibalulekile, njengokuzijabulisa. Nakhu okudingeka ukwazi mayelana nokulungiselela ngaphambi kokuhamba.
Ungayithola kanjani imigomo yakho yokuvakasha
Into yokuqala ofuna ukuyenza ukuhlela ukuvakashelwa nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo. Uzodinga ukwabelana lapho uhambela khona (ngisho nenkathi ohamba kuyo), uhlobo lwemisebenzi ozoyenza, indawo yokuhlala ohlala kuyo, iminyaka yakho, umlando wezokwelapha, noma ngabe ukhulelwe noma uzama ukukhulelwa, futhi imiphi imithi yokugoma oke wayithola esikhathini esedlule. Zonke lezi zinto zidlala indima ekunqumeni ukuthi yimiphi imithi yokugoma okufanele uyithole ngaphambi kokuphuma. Noma ngabe uke wagonyelwa izifo ezithile esikhathini esedlule, ungahle udinge i-booster.
Kungcono ukuhlela lolu hambo okungenani amasonto ayisithupha ngaphambi kohambo. Eminye imithi yokugoma idinga isikhathi sokuvumela umzimba wakho ukuthi uhlakulele ukuzivikela, kanti eminye idinga imithamo eminingana esakazeke ngaphezu kwamasonto.
ukulawulwa kokuzalwa okuhle kwenduna futhi akukho ukuzuza kwesisindo
Udokotela wakho angakwazi ukuphatha imigomo khona lapho ehhovisi. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi uzodluliselwa emtholampilo wokuvakasha. Zisindise uhambo olungadingekile ngokushayela phambili ukuze uqiniseke ukuthi imithi yokugoma oyidingayo iyatholakala.
Ngenkathi usehhovisi likadokotela, kuwumqondo omuhle futhi ukuthola ikhophi yanoma imiphi imiyalo (ephelele ngomthamo nezikhombisi-ndlela) oyithatha njalo; uzokufuna lokhu uma kwenzeka ubuzwa ngemithi yakho, noma uma udinga ukugcwalisa incwadi kadokotela kwenye indawo.
Ungahle ufune ukucela ezinye uma kwenzeka umuthi, futhi. Isibonelo, ukuba nemithi elwa namagciwane kanye ne-OTC Imodium (loperamide) esesandleni kutholakala kahle uma igama eliqanjwe ngobuhlakani uhudo lwabahambi iziteleka. Ngokuya ngokuthi uyaphi, izinto zesitolo sezidakamizwa ezifana ne-sanitizer yezandla nama-tampon kungaba nzima ukuza, ngakho-ke kuwumqondo omuhle ukubeka isitoreji.
OKUhlobene : Yimiphi imigomo engingathola isaphulelo kuyo?
Ngabe imigomo yokuvakasha iyadingeka?
Ngakho-ke yimiphi imithi yokugoma ejwayelekile ongayithola ngaphambi kohambo? Ihlukaniswe yizinhlobo ezintathu zemigomo: inqubo ejwayelekile, enconyiwe, futhi iyadingeka.
Umkhuba imithi yokugoma yiyona evame ukunconywa e-U.S. Cishe uthole eminingi yayo usengumntwana, kepha eminye idinga ukugonywa njengomuntu omdala.
Uma uhamba endaweni ethile enengozi enkulu yesifo esivinjelwe umuthi wokugoma, akunjalo kunconyiwe uthola umuthi wokugoma. Futhi amazwe athile kudinga imithi yokugoma, imvamisa ukulwa ne-yellow fever.
Yimiphi imigomo engiyidingayo ekuhambeni?
Nayi imishanguzo emine ejwayelekile kakhulu enconyiwe (noma edingekayo) yokuhambela phesheya:
Umkhuhlane ophuzi: Yf-Wax ingenye yezinto ezivame kakhulu. I-yellow fever idluliswa ngomiyane ezingxenyeni ezithile ze-Afrika, eCaribbean, naseCentral naseNingizimu Melika. Ngokuya ngokuthi uyaphi, kungadingeka ukuthi ubonise ubufakazi bokuthi uthole umuthi wokugoma we-yellow fever ngaphambi kokuba uvunyelwe ukungena; udokotela wakho angakunika isitifiketi.
Imasisi: Ngokusho kwe- i-CDC , amacala amaningi amasimungumungwane e-U.S. aqala ngohambo lwamazwe omhlaba, ikakhulukazi ezingxenyeni ezithile zase-Asia, eMiddle East nase-Afrika, yize eminyakeni embalwa edlule, ukuqubuka kwezifo kuyenzeka kakhulu emhlabeni. Ngenkathi abantu abaningi abazalwa ngemuva kuka-1957 e-U.S. Begonyelwe isimungumungwane, kujwayelekile ukuthi abantu baphuthelwe yimithamo emibili edingekayo enikeza amasosha omzimba ngokugcwele. Qiniseka ukuthi uhlola isimo sakho sokugoma nomhlinzeki wakho wokunakekelwa okuyisisekelo ukuze ukwazi ukuthola ulwazi olusha uma kunesidingo.
I-Hepatitis A: Lesi ngesinye sezifo ezivinjelwa kakhulu umuthi abantu abazithola ngesikhathi sohambo. Isifo sesibindi sisakazeka ngokudla noma ngamanzi angcolile, futhi sivamile ezingxenyeni ezithile ze-Afrika, i-Asia, i-India, i-Central kanye ne-Ningizimu Melika, kanye ne-Middle East. Buza udokotela wakho mayelana I-Havrix kuqhathaniswa I-Vaqta .
OKUSHIWO: Ingabe kufanele uthole umuthi wokugoma we-hepatitis A?
Isiphepho: Kubangelwa amagciwane atholakala ekudleni nasemanzini angcolile emazweni asathuthuka, izimpawu ze-typhoid zivame ukuthatha izinsuku eziyi-7-14 ukuvela. Kunezindlela ezimbili ongakhetha ngazo lo mgomo: UTyphim Vi , ukudubula okungasebenzi komthamo owodwa, noma Vivotif , i-capsule yomlomo ephilayo enezilinganiso ezine. Yomibili imigomo idinga i-booster.
Bheka i- CDC iwebhusayithi isigaba sabahambi, bese ubuza udokotela wakho ukuthi yimiphi eminye imigomo ongayidinga lapho uya khona.
I-FDA igunyaza u-Ervebo, umuthi wokugoma wokuqala we-Ebola
Imithi yokugoma okufanele uyicabangele uma usuqede iminyaka engama-50
Ungayigoma kanjani ingane yakho ngaphambi kwekolishi
I-Afrin vs. Flonase: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
thatha ama-probiotic kanye nama-antibiotics ngasikhathi sinye
uthola isisindo ekudutshulweni kokubeletha
siyini isithako esisebenzayo ku-zyrtec
kwenzekani lapho uxuba i-benadryl notshwala